CNC Machining, plastika tsindrona molding, forging, mangatsiaka Extrusion - Prototek
Ny ampahany amin'ny injection Molding
MIFIDY SERVICE MANUFACTURE
Mitady mpamatsy azo itokisana sy haingana amin'ny fitaovana plastika sy metaly vita amin'ny milina? Miaraka amin'ny milina CNC an-jatony, ny Prototek dia afaka manome ampahany cnc mahazatra amin'ny fangatahana. Ao amin'ny Prototek, ny trano fanaovana machining CNC dia natao famokarana ambany-volony amin'ny fampiasana farany.
Ny dingan'ny fandroahana mangatsiaka dia ny fanerena ny billet amin'ny fitaovana amin'ny alàlan'ny die ao amin'ny efitrano na ny mari-pana ambony kokoa, mamokatra vokatra tsy tapaka amin'ny fizarana tsy tapaka.
Prototek dia orinasa mpanao hosoka entin'ny angon-drakitra manana 10 taona maharitra amin'ny famokarana mazava tsara, injeniera ary fitantanana rojo famatsiana.
Prototek dia manolotra ampahany vita amin'ny tsindrona amin'ny kalitao avo lenta. Ny famolavolana tsindrona no dingana mora indrindra amin'ny fanaovana ampahany plastika amin'ny ambaratonga amin'ny fanomezana kalitao tsy miovaova ho an'ny famokarana antonony ka hatramin'ny avo.
ISAN'NY FIRENENA NANOMPO
MANUFACTURE FACIL ERAN-TANY
FAMPIANARANA MANUFACTURE ATO Etazonia
1 tapitrisa sq.
ISAN'NY MPANOMPO ASA
Tetikasa PUMP PART
Ny tetikasa PUMP PART azonay tamin'ny taona 2019.
Ny tetikasa fitaovam-pifandraisana elektronika, antsoina hoe DK.
Voavaha ny olana amin'ny famolavolana
Tetikasa vaovao ny andro mialoha ny fetim-pirenena (30 septambra 2019).
Ny PRE dia manolo-tena hanampy ny mpanjifa hampihena ny fandaniana.
Miara-miasa amin'ireo orinasa Innovative indrindra eran-tany
Room 1744, Building Xinlifang, No. 1216 Ziyang Road, Hi-tech District, Nanchang, JiangXi, Sina, 330072。
©Prototek 2018-2020 Vokatra mafana, Sitemap, AMP Mobile
Fitaovana Cnc amidy, Cnc Precision Parts, Cnc Spindle Parts, Mpamatsy Cnc, Mpanamboatra kojakoja vita amin'ny Cnc, Serivisy Cnc mora,
Mouldings plastika tsindrona
Mifandraisa hatrany amin'ny Prototek
Misoratra anarana hahazoana vaovao momba ny famokarana sy fanavaozana!